रोशन गिरी पहाड, तराई डुवर्सको निम्ति छुट्टै व्यवस्थाको निम्ति लड्ने प्रकाश गुरुङ भने गोर्खाल्याण्डको निम्ति लड्ने - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचाररोशन गिरी पहाड, तराई डुवर्सको निम्ति छुट्टै व्यवस्थाको निम्ति लड्ने प्रकाश गुरुङ भने गोर्खाल्याण्डको निम्ति लड्ने
गोर्खाल्याण्डको मुद्दा लिएर विधानसभा चुनावमा जाने विमल खेमा
अघिबाटै नगरपालिका चुनावसम्म गोर्खाल्याण्डलाई मुद्दा बनाएर लडिसकेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा(विमल खेमा) सोही मुद्दा लिएर यसचोटिको विधानसभा चुनावमा जनतासमक्ष जाने भएको छ। पहिलो खेमाको युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरूङले दार्जिलिङको एक प्रेस भेला मार्फत आज घोषणा गरेका छन्।‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाल्याण्डको लागि स्थापना भएको दल हो। त्यसकारण यसपालिको चुनाव पनि हामी गोर्खाल्याण्डलाई मुद्दा बनाएर लड्नेछौं’ उनले भने।यद्यपि, आज बिहान मात्र गुरुङकै महासचिव रोशन गिरीले पहाड, तराई र डुवर्सको निम्ति अलग्गै व्यवस्थाको निम्ति सम्झौता गरेको घोषणा गरेका छन्। प्रकाश गुरुङको अर्कै र रोशन गिरीको अर्कै वयानको अर्थ खोज्ने काम जनताकै हो।
अघिबाटै नगरपालिका चुनावसम्म गोर्खाल्याण्डलाई मुद्दा बनाएर लडिसकेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा(विमल खेमा) सोही मुद्दा लिएर यसचोटिको विधानसभा चुनावमा जनतासमक्ष जाने भएको छ। पहिलो खेमाको युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरूङले दार्जिलिङको एक प्रेस भेला मार्फत आज घोषणा गरेका छन्।
‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाल्याण्डको लागि स्थापना भएको दल हो। त्यसकारण यसपालिको चुनाव पनि हामी गोर्खाल्याण्डलाई मुद्दा बनाएर लड्नेछौं’ उनले भने।
यद्यपि, आज बिहान मात्र गुरुङकै महासचिव रोशन गिरीले पहाड, तराई र डुवर्सको निम्ति अलग्गै व्यवस्थाको निम्ति सम्झौता गरेको घोषणा गरेका छन्। प्रकाश गुरुङको अर्कै र रोशन गिरीको अर्कै वयानको अर्थ खोज्ने काम जनताकै हो।
यद्यपि, गोर्खाल्याण्ड विरोधी दल तृणमुलसँग गठबन्धन गरिसकेपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा लिएर जनता अगाडि जाँदा के जनताले पत्याउलान्? भन्ने प्रश्न गुरुङले जन्माएका छन्।
एक पत्रकारद्वारा सोधिएको उक्त प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रकाश गुरूङले भने, ‘मुद्दाको लागि हामीले केन्द्र सरकारसँग वार्ता गऱ्यौं। दिल्लीलाई बुझाउने कोशिश गऱ्यौं। फलस्वरूप भाजपाले हाम्रो मुद्दालाई आफ्नो संकल्प-पत्रमा अन्तर्भुक्त गऱ्यो। तर सङ्घीय ढाँचामा राज्यको पनि दाहित्व बन्दोरहेछ। यसचोटि क्षेत्रिय दलहरूलाई हाम्रो मुद्दाबारे सम्झाएर जनभावनालाई कदर गर्न सिकाउने हाम्रो कोशिश रहनेछ।’
गोर्खाल्याण्ड त केन्द्र सरकारको विषय हो। विधानसभा चुनावमा गोर्खाल्याण्डको सान्दर्भिकता रहला त? उनलाई प्रश्न सोधियो।
‘गोजमुमोको गठन नैं गोर्खाल्याण्डको लागि भएको हो। हामीलाई थाहा छ धेरै ठाउँ हामी चुक्यौं। तर यसचोटिको चुनावमा हाम्रो ध्यान क्षेत्रियतावादमा रहनेछ। तृणमुलले पहाडमा उम्मेद्वार नदिएर यहाँको क्षेत्रियतावादको सम्मान गरेको छ। भाजपाले पनि यसलाई सम्मान गर्छ भने यही कदम उठाउनुपर्छ’, उनले भने।
सन् २०१९ को लोकसभा चुनाव, जतिबेला गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको सान्दर्भिकता थियो त्यतिबेला पिपिएस भनेर चुनाव लड्ने विमल खेमा अहिले विधानसभा चुनावमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा लिएर जनता अगाडि जाने भएको छ।
यस गडबडीबारे पत्रकारहरूलाई स्पष्ट पार्न प्रकाश गुरूङले भने ‘हामीले भनेको पिपिएस गोर्खाल्याण्ड थियो।’
केही महिना अगाडि मात्र बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले जनपाइगुडी भ्रमणको क्रममा गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान आफूले गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। घोषणा भए लगत्तै मोर्चाको दुवै खेमाले मुख्यमन्त्रीको आश्वासनलाई स्वागत जनाएको थियो। यद्यपी मुख्यमन्त्रीले भनेको स्थायी राजनैतिक समाधान के हो, त्यसबारे व्यापक अल्योलता छ।
मुख्यमन्त्रीको स्थायी राजनैतिक समाधान पक्कै पनि बङ्गालबाहिरको स्वयत्त व्यवस्था चाहिँ होइन। यो कुरा पहाडको हरेक जनतालाई थाहा छ।
‘कुनै हालमा बङ्गाल विभाजन हुँदैन’ ममता व्यानर्जीले यही वाक्य अनेकचोटि दोहोऱ्याइरहेकी छिन्।
हिजैमात्र मोर्चा पहिलो खेमाको महासचिव रोशन गिरीले मुख्यमन्त्रीले भनेको स्थायी राजनैतिक समाधानको समर्थनमा तराई-डुवर्सका विधानसभा सिटहरूमा तृणमुललाई सघाउने कुरा एक प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्। यसका साथै उनले पहाडको तीनैवटा सिटमा आफ्नै उम्मेद्वार दिने घोषणा पनि उनले उक्त प्रेस विज्ञप्ती मार्फत गरेका थिए।
के मुख्यमन्त्रीले भनेको पिपिएस गोर्खाल्याण्ड हो? भनि एक पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नमा आजैमात्र युवामोर्चा सहसचिवको रूपमा नियुक्त भएका नोमन राईले भने, ‘यसमाथि मुख्यमन्त्रीको आफ्नै धारणा हुनसक्छ। तर हाम्रो लागि पिपिएस गोर्खाल्याण्ड नैं हो।’
पहाडको तीनैवटा सिटमा आफ्नो उम्मेद्वार नदिने तृणमुलको घोषणालाई प्रकाश गुरूङले स्वातग गरेका छन्।
‘हामीले तराई-डुवर्समा तृणमुललाई सहयोग गर्ने आधिकारिक घोषणा गरिसकेपछि तृणमुलले पहाडमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले तृणमुलसँग मिलेर चुनाव प्रचारमा जाने सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै थपे, ‘यसबारे हिल टिएमसीसँग हाम्रो अनेक स्तरको बातचित चलिरहेको छ।’
यता लोकसभा चुनावमा विनय खेमाले तृणमुललाई सहयोग गर्ने अनि विधानसभा चुनावमा तृणमुलले विनय खेमालाई सघाउने सम्झौतामाथि पनि प्रकाश गुरुङले टिप्पणी गरेका छन्।
‘तृणमुलको विनय खेमासँग लोकसभा चुनावको तीतो अनुभव छ। चुनावमा उनीहरूले तृणमुललाई जिताउन नसकेकै कारण हामीसँग सम्बन्ध बनाएका हुन्’ उनले भने।